Iyo itsva vhezheni yeHondo yeWesnoth 1.14.5 yakatoburitswa kare | Linux Vakapindwa muropa
Hondo yeWesnoth eimwe yemitambo yakavhurwa sosi yemitambo mitambo inozivikanwa kwazvo yaunogona kutamba izvozvi.
Kwete uyu mutambo chete yave iri mukukudziridzwa kwenguva yakarebaIyo ine stellar gameplay, yakawanda yakasarudzika mamakanika, uye zvinongova zvinofadza kuongorora nzira yaunoitamba nayo.
Kana iwe wakambotamba maDungeons nemaDragons, iwe uchave unoziva nerudzi rwenzvimbo kupfuura Hondo yeWesnoth.
Zvinoshamisika kuti zvakaoma uye kwete mutambo wekufungidzira iwe unogona kusvetukira mukati ipapo, asi Hondo yeWesnoth ine zvakawanda zvezvinhu zvakavanzika zvakadzika mukati mayo.
Uyu mutambo une nzvimbo nhatu, kusanganisira nyika dzekuchamhembe, nzvimbo yeElves yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, pamwe nehumambo hweWestnoth.
Dzimwe nzvimbo dzakaita seumambo dzakabudirira, nepo dzimwe dzakaita senge kuchamhembe, semuenzaniso, dzakazara nemaorcs, vatorwa, uye madzviti
1 Nezve Hondo yeWesnoth
2 Nezve iyo nyowani vhezheni Hondo yeWesnoth 1.14.5
3 Maitiro ekuisa Hondo yeWesnoth paLinux?
Nezve Hondo yeWesnoth
Battle nokuti Wesnoth ndeye-yekutendeuka-yakavakirwa zano mutambo ine yekufungidzira theme mune iro basa rako kuumba uto rakakura kuti utorezve chigaro cheWesnoth.
Kune kutanga, huwandu hwemabasa aunogona kutamba unopa mutambo uyu musiyano wakawanda.
Kuwanazve chigaro cheumambo hachisi chinhu asi danho- Iwe unogona zvakare kuchengetedza nzvimbo yekunze, utarisana nevarwi vazhinji vasina kufa uye utungamire maelves kuti vagadzire imba nyowani muumambo.
Kune zvinopfuura mazana maviri mayuniti kutora kutonga nemadzinza gumi nematanhatu akasiyana nemapoka matanhatu makuru. Uye kana izvo zvisina kukwana iwe unogona kutogadzira ako mepu, zviitiko, uye mayuniti mhando.
Iko kugona kwekugadzira yako wega dhizaini yekutamba inonakidza zvechokwadi kune yakavhurika sosi RPG.
Hondo yeWesnoth zvakare mutambo wehunyanzvi, unoda kuti iwe utamise zvikwata kuti ukunde vavengi vako, izvo zvinoda kuti basa riitwe nezvikwata zvakawanda zvinofamba kamwechete.
Kana zvasvika pakuvhura sosi yekufungidzira RPG mitambo, Iyo Hondo yeWesnoth chiitiko chakanakisa.
Zvisinei, eChirongwa ichi chinosanganisira zvinopfuura zvakakwana mishandirapamwe yekuchengetedza kufarira kwako, imwe neimwe iine nyaya yayo.
Semutangi iwe unogona kutanga nechimwe chinhu chipfupi, pamwe paunongofanira kuwana munhu mumwe chete, pamwe kurwa hondo diki; mamwe matanho akaomarara anogona kukupa iwe basa rekudzivirira nyika yako kumasoja anodzivirira; uye yakarebesa ichakutungamira kuburikidza nemakumi maviri kana anopfuura mamiriro, inovhara zvese zvemutambo uye kuyedza zvakanyanya hunyanzvi hwako hwekuita.
Kana izvo zvisina kukwana, kune akawanda mushandisi-akagadzirwa macampaign aunogona kurodha pasi uye kuyedza, kana iwe unogona kushanda neyayo mepu edhita uye programming mutauro uye nekugadzira zviitiko zvitsva zvako. Uye zvechokwadi panogara paine sarudzo yevatambi vakawanda, zvichikubvumidza kupokana kusvika kusere shamwari dzekurwira muhondo.
Nezve iyo nyowani vhezheni Hondo yeWesnoth 1.14.5
Mamwe mazuva apfuura Iyo nyowani vhezheni yeHondo yeWesnoth 1.14.5 yakaburitswa inogadzirisa akasiyana mabhugi kusvika pane yaive vhezheni yayo yapfuura.
Zvekugadzirisa izvo tinogona kumira yeiyi vhezheni itsva tinowana zvinotevera:
Yakagadzirisa dambudziko reAI kuregeredza nzvimbo dzetereport kana ichifambisa mutungamiriri kune zvinangwa zvemutungamiri
Rega kukanzurwa kwekurwiswa paunenge uchigadzira kufamba + kwekurwisa zvikamu zvevavengi
S7: Zvino hazvigoneke kuuraya vese vatevereri.
Zvakavanzika zveVakare: Kururamisa mune nhaurirano yakataurwa nechisimba yuniti uye kudzosera kururamisa kwakapfuura
Iyo Hammer yeThursagan: S10: Chengetedza zvinangwa zvinoda zvakawanda kubva kumutambi
Maitiro ekuisa Hondo yeWesnoth paLinux?
Kuti ugone kumisikidza uyu wakanaka mutambo pane chero aripo eLinux kugoverwa, chete isu tinofanirwa kuve nerutsigiro rweFlatpak, vanogona kutarisar chinyorwa ichi.
Uye ivo vanofanirwa kuita unotevera kuraira mune terminal kuisa mutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Iyo itsva vhezheni yeHondo yeWesnoth 1.14.5 yakatoburitswa